Iindaba -I-XCMG yaManzi aQhelekileyo yoKomba
Ukumba amandla kunceda ukungathathi cala kwikhabhoni
Kwiminyaka yakutshanje, ekuphenduleni umgaqo-nkqubo wesizwe wophuhliso lwamandla acocekileyo kunye nokukhuthaza uphuhliso kunye nokusetyenziswa kwamandla ombane welizwe lam, i-XCMG Foundation isungule ukuqhubela phambili kwicandelo lokomba umbane kunye nemveliso. I-XCMG enzulu (amanzi) yemigodi yokugrumba kakuhle ephuhliswe kunye isetyenziswa ngokubanzi kumthombo ongekho nzulu womhlaba umoya-moya, ulwakhiwo oluphakathi nolunzulu. Amacandelo ombane acocekileyo anje nge-geothermal, imithombo eshushu, imethane yamalahle kunye negesi ephuma kwishale.
Kuhlangulo lweMigodi yeGolide yaseShandong Qixia ngoJanuwari kulo nyaka, iXCMG XSC1200 nzulu yomgodi wokumba kakuhle uthathe inxaxheba kulwakhiwo lomngxunya wokuhlangula. Njengokuphela kwesixhobo esinzulu sokumba izixhobo zangoku, iXCMG XSC1200 yayiligama lezixhobo zasekhaya ngolwakhiwo lwazo oluchanekileyo kunye nendawo yesibini kwimifanekiso yonke.
Nangona i-XCMG's (amanzi) yokumba kakuhle kweergi "yinkwenkwezi ekhulayo" kolu shishino, ngobuchwephesha bayo obuphezulu kunye nokusebenza okuphezulu, ikhawulezile ukukhutshwa kwamandla acocekileyo kwiindawo ezininzi kwaye yanceda kuphuhliso lwasekhaya loqoqosho oluhlaza.
I-XCMG enzulu (amanzi) yomgodi wokugrumba kakuhle udibana nobuchwephesha bokwakha amanzi kunye negesi. Ngama-10,000-iiyure zokungaphumeleli kwisalathiso senkqubo ye-hydraulic, iye yamkelwa ngazwi linye ngumsebenzisi kunye nePati A ngokuthembeka kwayo okuphezulu kunye nokusebenza kakuhle.
Kwi-Wugong Mountain Scenic Area e Jiangxi, i-XCMG amanzi kakuhle kusombiwa isixhobo sombiwa amanzi ashushu entwasahlobo kubunzulu 1,680 yeemitha. Iziphumo zamanzi zemihla ngemihla zimalunga neetoni ezingama-500, kwaye ubushushu bamanzi ngama-55 ° C, ahambelana kakhulu neemfuno zobushushu bamanzi kuphuhliso lwemithombo eshushu, kuvula indawo entsha yokukhula kwezoqoqosho kwiindawo ezinembonakalo yelizwe.
E Qinhuangdao, XCMG amanzi kakuhle kusombiwa koomatshini isixhobo ngoncedo Noobo Group iprojekthi umthombo pump ubushushu umthombo, kwaye basebenza nzima ukwakha isibhakabhaka oluhlaza loo mama kunye nokukhusela iintaba eziluhlaza kunye namanzi ilizwe.
Imoto entsha ihanjiswa emntwini, kwaye ukusebenza okufunekayo kunye nezakhono zokugcina ziqeqeshiwe; injineli esebenzayo ifika ngqo kwindawo yesehlo ukunceda abathengi abanamava okanye ubunzima; Imveliso isetyenziselwa malunga neentsuku ezili-15, kwaye isebe lezentengiso lithatha inyathelo lokuqala ukubuyisa abathengi ukuba baqonde ukusetyenziswa kwemveliso, eyenziwa minyaka le kuhambo olukhethekileyo lomgangatho, utyelelo olusebenzayo kwii-rigs zasekhaya nakwamanye amazwe, ukusombulula ubunzima kunye neengxaki zabasebenzisi kwindawo leyo.
Ixesha Post: Jun-10-2021
Umatshini wokugrumba amaqula, Umatshini weDth Rig, imfumba yokomba isixhobo, Umatshini wokugoba amanzi amancinci,